Araka ny tatitra farany avy amin'ny LEDinside, fizarana iray an'ny orinasam-pikarohana momba ny tsena TrendForce, Global Global LED Digital Display ary Micro LED Display Market Outlook, noho ny fitotonganan'ny toe-karena, ny tsena LEDdisplay eran-tany dia niaina fitomboana voafetra ary nihena ny fangatahan'ny tsena ny fampisehoana nentim-paharazana. Na izany aza, noho ny fivoaran'ny fisehoana tsara dia tsara tato anatin'ny taona vitsivitsy, nitombo indray ny filan'ny tsena fampisehoana. Tamin'ny 2017, ny refin'ny tsena fampiratiana LED manerantany dia nahatratra USD 5,092 miliara. Ny fampiroboroboana tsara dia tsara (≤P2.5) dia hitazona hatrany ny fitomboana aorian'ny fivoarana haingana tao anatin'ny taona vitsivitsy, ary ny haben'ny tsena tamin'ny 2017 dia USD 1,141 miliara ary ny CAGR an'ny 2017-2021 dia andrasana hahatratra 12%.
Mampiseho ny fironana amin'ny tsena
Tamin'ny 2017, ny refin'ny tsena fampiratiana LED manerantany dia nahatratra USD 5,092 miliara. Ny fampiroboroboana tsara dia tsara (≤P2.5) dia hitazona hatrany ny fitomboana aorian'ny fivoarana haingana tao anatin'ny taona vitsivitsy, ary ny haben'ny tsena tamin'ny 2017 dia USD 1,141 miliara ary ny CAGR an'ny 2017-2021 dia andrasana hahatratra 12%.
Raha jerena ny fampiharana an'ny pitch pitch tsara dia azo zaraina ho sokajy efatra izy aseho etsy ambany. Fampiharana fampielezam-peo (Auditorium); Efitra fiarovana sy fifehezana (efitrano fanaraha-maso sy efitrano fanaraha-maso); Fampiharana fampisehoana ara-barotra (ao anatin'izany ny fampisehoana ara-barotra, fampirantiana, efitrano fivorian'ny orinasa, efitrano fivorian'ny hotely sy teatra sns); fampiharana ho an'ny daholobe sy ny varotra (indrindra misy ny fampisehoana ivelany, seranam-piaramanidina, metro ary fampiharana antsinjarany). Ny sehatry ny varotra, ny sehatra ho an'ny daholobe ary ny varotra dia manana fitomboana lehibe indrindra amin'ny ho avy. Ny seho LED dia hisolo ny DLP sy LCD tsikelikely.
Tamin'ny taona 2016, ny ambaratonga fampirantiana LED eran-tany dia 5,001 miliara dolara ary ny mpamokatra valo voalohany dia 38% ny anjaran'ny tsena eran-tany. Anisan'izany, ny refin'ny tsena fampiroboroboana manerantany dia nahatratra USD 854 tapitrisa tamin'ny taona 2016. Raha jerena ny vola miditra amin'ireo mpanamboatra, ny mpamokatra 7 voalohany dia avy any Chine, ary i Daktronics no mitana ny laharana fahavalo. Miaraka amin'ny vokatra lehibe mitarika, ny mpamokatra 8 ambony indrindra dia mandray ny 78% amin'ny tsena manerantany, nanombatombana ny LEDinside fa ny tsena fampiroboroboana LED manerantany dia hitohy hitazona fitomboana haingana amin'ny 2017.
Fironana LED Market
Ny sandan'ny tsena LED Display amin'ny 2017 dia antenaina ho tonga amin'ny USD 1.63 miliara, ary tombanana ho USD 1,94 miliara amin'ny 2021. Ny fitomboan'ny fampisehoana LED pitch tsara dia miadana, fa ny fampisehoana pitch tsara kosa no tena hery lehibe hampiroborobo ny fangatahana fampisehoana LED .
Araka ny LEDinside, mpanamboatra LED fampirantiana nomerika dimy voalohany amin'ny fidiram-bola manerantany dia MLS, NationStar, Everlight, Kinglight ary CREE. Ho fanampin'izay, mpanamboatra chip LED LED nomerika dimy avo indrindra amin'ny fidiram-bola (varotra ivelany) erak'izao tontolo izao dia San'an Opto, Epistar, HC Semitek, Silan Azure, ary ChangeLight.
Fironana amin'ny tsena mpamily IC
Notarihan'ny fampisehoana LED tsara dia tsara, ny tsena ICs mpamily fampisehoana dia mitazona fitomboana haingana. LEDinside dia nanombatombana fa ny ambaratonga tsena mpamily fampisehoana ICs dia nahatratra USD 212 tapitrisa tamin'ny taona 2017. Araka ny fanadihadian'ny LEDinside, ny mpanamboatra dimy mpamily mpamantatra ICs dia Macroblock, Chipone, Sumacro, Sunmoon, ary My-Semi, izay maneho ny 92% amin'ny tsena rehetra mizara. Ny mpanamboatra hafa dia misy ny Developer Microelectronics sy Texas Instrument, sns.
Ho setrin'ny fironana eo amin'ny tsena amin'ny fametahana ny fefy, ny LED dia mihodina amin'ny teknolojia telo, ao anatin'izany ny COB pitch pitch tsara tarehy, ny QD phosphor dia mahatratra ny teknikan'ny RGB, ary ny fampisehoana Micro LED. Ankoatr'izay, ny tombony amin'ny fampisehoana Micro LED dia ahitana ny zoro fahitana, ny famirapiratana sy ny fifanoherana avo lenta, ny kalitaon'ny sary ambony ary ny sary tsy misy fangarony. Mandritra izany fotoana izany, ny mpilalao fampisehoana nentim-paharazana sy ny mpilalao LCD dia mikasa ny hiditra amin'ny tsena fampiratiana Micro LED amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa.